Ny dian-tongotra AirTag dia miasa tena tsara, afa-tsy any Korea | Avy amin'ny mac aho
Ny dian-tongotra AirTag dia miasa tena tsara, afa-tsy any Korea
Manuel Alonso | 25/07/2021 14:00 | maro
Rehefa AirTag, dia iray amin'ireo fitaovana andrasana indrindra na ny mpampiasa na ny an'ny mpikambana ao amin'ny Apple. Izy ireo dia nivadika ho fitaovana mora ampiasaina tokoa nefa ambonin'izany dia fitaovana tena mandaitra tokoa. Hany ka ny sasany nampiasa azy io tamin'ny tanjona tsy mitovy amin'ny noheverin'ny orinasa, izay noterena hamerina ny fandaharana mba tsy hanohizan'izy ireo ny fivarotany tena. Ny rafitry ny toerana dia tena mandeha tsara ary asehon'ity YouTuber ity. Nandefa toerana telo samihafa tamin'ny toerana telo tena tandindona izy ary samy hafa ny valiny.
1 Elon Musk, Tim Cook ary Kim Jong-Un no mpandray ny AirTag. Vinavina iza no namerina izany?
1.1 AirTag mankany Elon Musk
1.2 Korea Avaratra
1.3 Tim Cook
Elon Musk, Tim Cook ary Kim Jong-Un no mpandray ny AirTag. Vinavina iza no namerina izany?
Izahay dia nandinika ny fomba nipoitra tsikelikely momba ny AirTags. Hatramin'ny efa nampiasan'ny sasany azy fanaraha-maso / fampijaliana olona hafa. Safidy izay tsy tian'ny hevitry ny besinimaro ary izany Apple te-hanasitrana miaraka amin'ny fanavaozana izay nahatonga ny fampiasana tsy dia mahomby na farafaharatsiny mora tanterahina.
Na izany aza, misy tantara hafa mahaliana sy mampihomehy aza momba ny fampiasana ny Find My and AirTags. Ity iray izay entinay anao ity dia liana amin'ny fahalianana ary heveriko fa mendrika ho fantatra izany. YouTuber dia nanana io hevitra io hatramin'ny alalany fantsona MegaLag fantsonao. Ny hevitra dia ny handefa AirTags telo amin'ny olona samy hafa sy hanaraka ny fivoarany. Amin'izany no ahitantsika ny fomba fiasan'ny orinasa parcel, ny ora misy eo amin'ny toerana tsirairay, sns ...; Samy nahazo tombony avokoa ireo telo nahazo. Amin'ny lafiny iray ananantsika Elon Musk. Tsy afaka nanadino an'io fotoana nifanomezana io i Tim Cook. Fa ny nahagaga dia ny mety hitranga amin'ny fandefasana ilay fitaovana any Korea Avaratra.
AirTags rehetra dia nalefa avy tany Frankfurt, Alemana, ary ny Find My network dia afaka nampiseho ny toerana nisy ny fonosana. Ny fampiharana dia hita ny AirTags amin'ny toerana toy ny fampiasa DHL ary eny amin'ny seranam-piaramanidina aza alohan'ny niaingany ho any amin'ny firenen-kafa.
Somary lava ny tantara iray manontolo ary nozaraina ho horonan-tsary roa, saingy mahaliana ihany izy ireo satria ny YouTuber dia manazava ny zava-nitranga tamin'ny AirTag tsirairay avy sy ny fomba fiasan'ilay mpanara-dia isaky ny dia. Tena mendrika ny hijerena izy ireo. Hanao aho fintino kely ny dia amin'ny AirTags tsirairay avy ary ho hitantsika hoe iza amin'ireo no tonga tany amin'ny nalehany ary inona no nanjo azy ireo.
AirTag mankany Elon Musk
Ny AirTag nalefa tany Elon Musk dia tonga tao amin'ny foiben'ny SpaceX ary nijanona tao nandritra ny roa herinandro sy tapany, rehefa tazana tao amin'ny foibe fanodinana izy io talohan'ny famantarana farany nataony tao Castaic, Kalifornia. Ka mieritreritra izahay fa tsy mba teo am-pelatanan'i Elon Musk ary izany tsy hiditra ao amin'ny toeran'ny orinasanao akory izy io. Tsy maintsy olona be atao ianao amin'ny filalaovana ireto "lalao" ireto.
Raha nieritreritra ianao fa azo inoana fa tonga tany amin'ny firenena ny AirTag ary nianjera teo an-tanan'i Kim Jong-Un aza, dia kandidà ho sangisangy amin'ny Andron'ny April Adala ianao. Betsaka ny filaminana any amin'io firenena io ka tsy akaiky akory. Izy io dia hoe tsy nanakaiky, fa noho ny antony teknika kokoa noho ny zavatra hafa rehetra. Ny zava-misy mahafinaritra dia ny AirTag nalefa tany Korea atsimo, saingy tsy niseho tamin'ny Find My hatrizay Tadiavo ny tamba-jotra misy ahy tsy misy noho ny lalàna mifehy eo an-toerana
Mahaliana fa ny AirTag nalefa tany Apple Park dia fantatra tampoka tany amin'ny toerana iray any Nevada, USA YouTuber nanamarina ny Flight Radar ary nahita fa ny sidina nitondra ny fonosany dia nanidina teny ambonin'io toerana io, ka azo inoana fa AirTag nifandray tamin'ny iPhone an'ny olona iray teo amin'ny fiaramanidina ary nametraka avy hatrany ny toerana hoe Find My.
Tonga tao amin'ny Apple Park ny AirTag ary nijanona tao nandritra ny enina herinandro talohan'ny nandefasana azy hiverina tany Alemana. Mamadika izany Apple dia namerina ny AirTag niaraka tamina taratasy tany amin'ny YouTuber. Natao pirinty tamin'ny taratasy nisy zorony boribory mihitsy aza ilay taratasy ary nosoniavin'ny iray tamin'ireo mpanampy an'i Tim Cook. Ilay mpanatrika, fantatra amin'ny anarana hoe Michael, dia nilaza fa ny orinasa dia "faly nandre ny fampiasana famoronana AirTags" ary nilaza fa mandray taratasy an-jatony isam-bolana i Tim Cook, saingy tsy afaka mamaly ny taratasiny rehetra izy.
Ry Jonathan malala, misaotra anao nizara ny tetikasanao ho an'ny Apple AirTags. Faly izahay fa maheno ny fampiasan'ny AirTags famoronana sy ny fomba hanatsarany ny fiainan'ny mpanjifanay. Araka ny azonao an-tsaina, Andriamatoa Cook dia mahazo taratasy an-jatony isam-bolana avy amin'ny mpanjifa toa anao. Mampalahelo fa tsy afaka mamaly ny fangatahana rehetra io. Fa manantena izahay fa hanohy hankafy ny AirTag anao rehefa miverina avy amin'ny dia tsy manam-paharoa eran'izao tontolo izao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny dian-tongotra AirTag dia miasa tena tsara, afa-tsy any Korea
Amerika Ferrera dia manatevin-daharana ny mpilalao ao amin'ny andian-dahatsoratra mini WeWork
Fanomezana avy amin'i Apple Germany, Studio Buds, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho